Wafti ka kooban maayarada degmooyinka JSL oo uu horkacaayo maayar suleiman Hassan Haddi ayaa sidiiran loogu soo dhaweeyey caasimada dalka uganda ee Kampala. | Gabiley News Online
Wafti ka kooban maayarada degmooyinka JSL oo uu horkacaayo maayar suleiman Hassan Haddi ayaa sidiiran loogu soo dhaweeyey caasimada dalka uganda ee Kampala.
September 5, 2019 - Written by maxamed jeex
Waftigan ayaa iskugu jirey maayarada degmooyinka somaliland agaasimayaasha wasaaradaha daakhiliga,hawlaha guud & gudoomiyaha hayada shaqaalaha ee JSL.
Waftigan waxaa loo soodhaweeyey si maqaamkeedu aad u sareeyo oo lamid ah sidii dalalka la aqoonsan yahay oo kale waana guul u soo hoyatey dhamaan shacabka reer somaliland oo dhan.
Waftigan ayaa dalkaasi uganda joogi doona mudo 10 cisha ah sida uu noo sheegey maayar ka degmada borama mar maanta aan khadka telefoon ka kula xiriirney. Mar aan weydiiney su,aal ahay maxaad u tegteen dalka uganda ayaa maayar ku wuxuu noogu jawaabay qaranka ayaan u shaqeyneynaa.
Su,aal ayaad la kunateen ilaa,& imika.
Jawaab Waxaan la kulaney dad madax ah oo masuuliyad waaweyn ka haya dalkaasi oo runtii aad ugu faraxsan iney arkaa dadka ka socda degmooyinka JSL oo kuwo ku yimid doorasho xor & xalaal ah rabana dalkoodu inuu maalin uun ka mid ahaado qaramada midoobay.
Ugu danbayntii weftigan ayaa waxay kulamo isdabajooga layeesheen masuuliyiinta dalka uganda waxa kale oo ay iyaguna islagarteen inshaqaalaha dawladaha hoose iyo wasaaradahaba schoolarshipyo loogusoodiro machadka Uganda management institute UMI. Arintani waxay guul utahay qaranka somaliland iyo intii arintaa kasooshaqaysay oo uu hormuud uyahay gudoomiyaha machadka shaqaalaha somaliland weftiga mayorada ah ee lasocda iyo agaasimeyaasha wasaaradaha A.gudaha iyo hawlaha guud.
Wuxuuna noogu darey maayar ku isaga oo hadalkiisa sii wata,waxaanu ka wada hadalney arimo farabadan oo kor u qadaaya xiriirka labada dalk in aad loo xoojiyo,gaar ahaan wixii khibrada ahna ee ku saabsan xaga dawladaha hoose inaan mar walba is weydaarsano.
Maayar ku guntii & gabagabadii wuxuu aad ugu mahad naqayaa shacabka & dawlada uganda sida wanaagsan ee ay noo qabileen.
Maayar suleiman waxa kale oo sidoo kale mahad u celinayaa jaaliyada reer somaliland ee dalka uganda degan sida mugale ee ay soodhaweyeen ayna ku farxeen iney arkaan madaxdoodii buuqasho ku timid dalka uganda.